La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 13 | Laga soo bilaabo Linux
La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 13
Sida caadiga ah, xitaa iyada oo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin, waxaan hadda kala soo bixi karnaa ka Mozilla FTP nooca xiga ee xasilloon ee Firefox, taas oo marka lagu daro hagaajinta iyo hagaajinta cilladaha, waxay ku dareysaa laba muuqaal oo cusub.
1 Helitaanka degdegga ah ee xulashooyinka ugu isticmaalka badan
2 Dial Degdeg ah ama Dial Speed
Helitaanka degdegga ah ee xulashooyinka ugu isticmaalka badan
Hore ayaan uga hadalnay sheekadan cusub Laga soo bilaabo Linux, iyo in kasta oo dadka isticmaala qaarkood u arkeen inaan loo baahnayn, haddana waxaan u arkaa inay waxtar badan leedahay. Si fudud ayaa si dhakhso ah loogu heli karaa qaar ka mid ah xulashooyinka uu adeegsaday adeegsadaha, sida Soo Degso, Plugins iyo shaqooyin kale, sida ka muuqata sawirka soo socda
Dial Degdeg ah ama Dial Speed
Wax cusub oo ah Firefox 13 waa wax aan ka daalnay inaan ku aragno daalacashada kale sida Opera, Midori o chromium waxayna ku saabsan tahay Wareeg degdeg ah o Wicitaan Degdeg ah, wax kastoo aad rabto inaad u wacdo. Si runta loo sheego, waxay qaadatay waqti dheer in lagu daro shaqadan asal ahaan.
Sida la ogsoon yahay, qaabkan borotokoolka SPDY waa in la helaa asal ahaan si loo dedejiyo rarka boggaga, oo lagu daro hada tabs-ka On-Demand, taasi waa, haddii aan dhowr tab furan lahayn, ma rarri doonaan illaa aan ka riixno iyaga. Waxaan arki doonaa wararka intiisa kale oo si rasmi ah loo bilaabi doono 😀
Firefox 13 Isbaanish 32 Xabo
Firefox 13 Isbaanish 64 Xabo
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 13
Wanaagsan, waxaan rajeynayaa ugu dhakhsaha badan inaan tago Fedora, waan jeclaaday FF ​​13
Ka soo degsashada iPod-kayga, ka dib waxaan ugu wareejinayaa Linux sftp.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka 🙂
Solusos waan haysanaa, kaliya adoo cusbooneysiinaya cayayaanka!
Runtu waxay tahay inaanan u maleynin inaan haysan laheyn solusos 1.1 oo ay ku jiraan kernel casriyeysan iyo Firefox cusub sida ugu dhaqsiyaha badan.
Sidii aan sheegay uma maleynaynin in si dhakhso leh loo cusbooneysiiyay, waxaan u maleynayay in joogitaanka safka hore + xasilloonida xirmooyinka aysan arkeynin iftiinka, laakiin waa iska soo horjeed opposite
Aan aragno markay helayaan interface-ka cusub>.
Shalay waan rakibay, sifiican ayey u shaqeysaa, dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah in bogga wararka ee aan booqdo maalin kasta uu ii diidayo marinka madaama aysan ansaxin saxeexa, taasi waxay ku dhacdaa wakiilka isticmaalaha meesha, haddii aan ka saaro, ma haysto dhibaatooyinka, wixii talo bixin ah?
Juer, maahan hal daaqad oo lulataaye ah oo ku taal Xawaaraha Xawaaraha
In niman yari ka hadheen: /
Epa epa .. xusuusnow inaan shaqada ka xirno ...
si fiican kuma gali karo ftp, oo markaan cinwaanka u beddelo http, wuxuu igu tuuraa xiriiriyahan
dabcanna qalad bay siisaa lol .. marka aan sugno inta ay rasmi ahaan u soo baxeyso
Waxaa laga yaabaa inaad ku soo dejisan karto wget
Wixii 32 yara
Wixii 64 yara
By the way, waxaan horey uga soo gudbiyay ipodkeyga waana tijaabinayaa
Waad ku mahadsan tahay faahfaahinta maadaama meelo badan oo qasab ah ay tahay inaad sugto.
Sifooyinka cusubi waa hagaagsan yihiin, laakiin Chrome ayaa uga dheereeya kombuyutarkayga.
Waxba igama gelin haddii ay ka dhakhso badan tahay kombuyuutarkaaga.
Kaoz lyre dijo
Noocee ayey ku badali doonaan is dhexgalka, ma jiraa qof og?
Ku jawaab Kaoz Lira
Amaah markay u soo baxdo Iceweasel cusub. XD
Waxaan wax ka qoraa Firefox 13 waxayna umuuqataa mid habaar ka dhaqso badan 12.0, ugu yaraan maaraynta xusuusta waa la ogaan karaa ... Thanks, Mozilla Inc ...
Shalay waxaan ka fekerayay sida yar ee ay wax uga abuurayaan Mozilla - marka loo eego taariikhdoodii hore ee weyn - ee la xiriirta Google iyo alaabooyinka sida Chrome / Chromium, waxaan rajeynayaa in bugfixes ka sokow ay la qabsan doonto Chromium taas, in kasta oo loo jiheeyo mashruucu ma socdo waan jeclahay, biraawsarka laftiisu waa * heer sare *.
Ubuntu hadda waa la cusbooneysiiyay Firefox, waxaanan dareemayaa xoogaa horumar ah xawaaraha. Ka sokow, in kasta oo ay tahay wax yar, waxaan jeclahay bogga cusub ee weyn. Waan sii wadi doonaa tijaabinta nooca cusub. hadda, kordhinta oo dhan waxay ku shaqeeyaan dhibaato la'aan !!!
Kudar noocyada Linux (GoogleWebFonts, UbuntuFonts, VistaFonts)
Play Zelda: Sirta Solarus DX ee GNU / Linux